Semalt समीक्षा: एक अद्भुत स्क्रीन स्क्र्यापिंग सेवा
Web2DB एक शक्तिशाली र उपयोगी स्क्रीन स्क्र्यापिंग र डाटा निकासी उपकरण हो। यो डाटाबेस बिल्डरको रूपमा काम गर्दछ र हामीलाई सजिलैसँग विभिन्न वेबसाइटहरूको जानकारी खान गर्न अनुमति दिन्छ। यो वेब स्क्रेपरले वेबसाइटहरू र HTML पृष्ठहरूबाट अप्रबन्धित जानकारी स col्कलन गर्दछ र यसलाई व्यवस्थित र संरचना गर्दछ। तपाईंले भर्खरै भन्नु पर्ने हुन्छ कि तपाई के खोज्न चाहानुहुन्छ र कसरी तपाई आफ्नो डेटा फर्म्याट गर्न चाहानुहुन्छ, र Web2DB ले निर्देशन अनुसार यसको कार्य गर्दछ। डाटा MySQL, CSV, पहुँच र एक्सेल प्रारूपहरूमा बचत गर्न सकिन्छ। Web2DB सँग सुविधाहरूको सम्पत्ति छ जुन यसलाई वेबमास्टरहरू, उद्यमहरू, व्यवसायीहरू, प्रोग्रामरहरू, र कोडरहरूको लागि उत्तम विकल्प बनाउँदछ। यसका केही विशिष्ट सुविधाहरू तल छलफल गरिएका छन्।
१. परियोजना सम्पादकको रूपमा:
Web2DB शक्तिशाली र आश्चर्यजनक परियोजना सम्पादकको रूपमा कार्य गर्दछ। वेब स्क्र्यापिंग प्रोजेक्टहरू डिजाईन गर्न सजिलो हुँदैन जबसम्म तपाईंसँग पर्याप्त प्रोग्रामिंग सीप हुँदैन। तर Web2DB को साथ, तपाईलाई प्रोफेशनल प्रोग्रामर वा कोडर हुनु आवश्यक पर्दैन किनकि तपाई यो बिना नै तपाईका कार्यहरू गर्न सक्नुहुनेछ। यस उपकरणले स collect्कलन, सम्पादन, मेरो वा तपाईंको डाटा निकाल्ने छ। साथै, यसले फरक डाटा ढाँचा विकास गर्न मद्दत गर्दछ जुन पृष्ठ लेआउट परिवर्तन भए पनि पूर्ण रूपमा कार्य गर्दछ। तपाइँको सबै सम्पादन र निकाल्ने सम्बन्धित परियोजनाहरू केहि क्लिकहरूसँग सम्पन्न भएका छन्।
२ सजिलै सम्पूर्ण सामग्री संरचना क्याप्चर:
तपाईं पूर्ण वेबसाइट वा यसको पृष्ठहरू केहि डाउनलोड गर्न Web2DB कन्फिगर गर्न सक्नुहुनेछ। यसले सजिलैसँग सम्पूर्ण सामग्री संरचना समेट्दछ, यसलाई एक उत्कृष्ट फारम प्रदान गर्दै। तपाईं या त केहि वेब पृष्ठहरू कन्फिगर गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईंको आवश्यकताको आधारमा सम्पूर्ण साइट, तर सामग्रीको गुणवत्ता बिल्कुल गडबड छैन। यो उपकरण अमेजन, eBay, PayPal, र अन्य जस्तै विशाल साइटहरूको लागि उपयुक्त छ। Web2DB सँग बिभिन्न उन्नत सुविधाहरू छन् र हामीलाई वेब स्क्र्यापिंग प्रदर्शन अनुकूलन गर्न मद्दत गर्दछ। यो एक भरपर्दो र व्यापक उपकरण हो।
Web. वेब फारमहरू बुझाउनुहोस्:
Web2DB प्रयोग गरेर, तपाइँ वेब फारमहरू विशेष रूपमा खोजी फारमहरू र अनलाइन बुकिंग फारमहरू कुनै पनि समस्या बिना पेश गर्न सक्नुहुन्छ। फारामहरू सबै इनपुट मानहरूको लागि पेश गर्न सकिन्छ, र झिकिएको डाटा CSV ढाँचामा प्राप्त गरियो। तपाईले यो प्रोग्राम प्रयोग गरेर किवर्ड-आधारित डाटा पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र राम्रो इन्डेक्सिंग र क्रलिंगको लागि तपाईंको साइट खोजी ईन्जिनहरूमा बुझाउन सक्नुहुनेछ।
D. गतिशील वेबसाइटहरूसँग डिल:
Web2DB को अर्को विशिष्ट सुविधा यो हो कि यसले दुबै आधारभूत र गतिशील वेबसाईटहरूसँग व्यवहार गर्न सक्छ। धेरै आदिम स्क्र्यापिंग प्रोग्रामहरू अत्यधिक गतिशील वेबसाइटहरूबाट पढ्न योग्य सामग्री निकाल्न सक्दैनन्। यहाँसम्म कि पेशेवर वेब स्क्रैपरहरूमा एजेक्स वेबसाइटहरूबाट डेटा कटाईको सवालहरू छन्, तर वेब २ डीबीले तपाईलाई गतिशील साइटहरूबाट डाटा निकाल्न सजिलो बनाउँदछ। तपाईंले दिमागमा राख्नुपर्दछ कि AJAX साइटहरूको डेटा निकाल्न केही समय लिने छ।
Support. बिभिन्न ढाँचाहरूलाई समर्थन गर्नुहोस्:
Web2DB ले तपाईंको एक्क्र्याट गरिएको डाटा एक्सेल, Oracle, OleDB, MySQL, CSV, XML, र Excel मा निर्यात गर्न सक्दछ। यदि तपाईं आधारभूत प्रोग्रामिंग सीपहरू पाउनुहुन्छ भने तपाईं निर्यात स्क्रिप्टहरू डाटा निर्यातलाई अनुकूलित गर्न पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। Web2DB एक्सेल २०० and र एक्सेल २०० to मा जानकारी निर्यात गर्न सक्दछ र तपाईको डेटामा विस्तृत रूपमा छविहरू इम्बेड गर्न मद्दत गर्दछ। यस उपकरणले स्प्याम सुरक्षा प्रदान गर्दछ, तपाईंको सुरक्षा र इन्टरनेटमा गोपनीयता सुनिश्चित गर्न।